သနပ်ခါးမေ: စိတ်ကူးနဲ့၂၀၁၀ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပွဲတက်ဝတ်စုံ တွေကို အမှတ်ပေးကြည့်ရအောင်
ဟန်ကြည် February 11, 2012 at 9:08 PM
အိမ်း ရိုးရာကို ပြင်လိုက်ကြသကိုး...ပေါ်သူကပေါ် ဖော်သူကဖော်နဲ့ သူ့ခေတ်ကိုးကွဲ့...
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) February 11, 2012 at 9:21 PM
စု February 11, 2012 at 9:31 PM
အကြိုက်ဆုံးက မယ်လိုဒီး)
မေမြို့မိုး February 11, 2012 at 10:07 PM
ဟုတ်ပအစ်မက အန်တီမို့က အသက်ကြီးမှ ..ဟော့ နေတယ်.။ အကုန်လုံးလှကြပါတယ်.။
ဒါနဲ့စကားမစပ်..။ ၀ါဝါအောင်.က ၀ါဝါမောင်ဖြစ်
ကိုရဲတိုက် ရဲ့ Leather တိုက်ပုံ၊မျက်မှန်နောက်
ပြန်နဲ့.၊ ပါဝါရိမ်းဂျားနာရီအစိမ်းလေးကို ကြည့်ပြီး
ကျန်တာတွေက ဒီဇုိုင်းတွေနဲ့ pattern တွေနဲ့ တအားရှုပ်နေတယ်။ လူရဲ့ အလှကိုမထင်းစေဘူး။
သက်မွန်မြင့်ဒီဇိုင်းက ရှုပ်ပေမဲ့ unique ဖြစ်တယ်။ ရုိုးရာနဲ့ မော်ဒန်ပေါင်းစပ်ပြီး ပုတီးတွေကရုိုးရာကြောင့်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ မမြင်ဘဲ အဲဒါကဘဲသူ့ ကုို unique ဖြစ်သွားစေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ နောက်အနက်လည်းလှတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်ပင်းမှာ ပတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ အောက်ကအဆင်နဲ့ matach မဖြစ်ဘဲ နှစ်ခုလုံးရှုပ်သွားစေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဒီနှစ်အကယ်ဒမီပုံတွေထဲမှာ စိုးမြတ်သူဇာနဲ.စိုးမြန်နနာ ညီအမ၂ယောက်ပုံ လုံးဝမတွေ.ရဘူးနော်။ ဒီပို.စ်က အကယ်ဒမီပုံတွေစုပြီးပြထားတယ်ဆိုလို.စိုးမြတ်သူဇာပုံများပါမလားလို.လာရှာကြည်.တာ၊
ရှုပ်ယှက်ခပ်မနေဘူးလေ။ တခြားမင်းသမီးတွေဝတ်ထားတာ ရှုပ်ယှက်ခပ်နေတာမှ တချို.ဆို အရှုပ်ပြိုင်နေသလားတောင်ထင်ရတယ်။သူတို. ကိုယ်ဝတ်မယ်.၀တ်စုံကို၊ သေချာပြန်မသုံးသပ်ကြဘူးလားမသိဘူး။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ.အခမ်းအနားမှာဝတ်မယ်.၀တ်စုံကို ၊ဒီဇိုင်နာတွေစိတ်ကြိုက်ချုပ်ချင်တိုင်းချုပ်ထားတာ၊တခြားစပွန်ဆာပေးမယ်.သူတွေစိတ်ကြိုက်ဝတ်ပေးရတာထက်ကို ကိုယ်နဲ.လိုက်မလိုက်လဲ ကိုယ်.ဟာကို စဉ်းစားသင်.တယ်ထင်တာဘဲ။ လှအဦတင်.၀တ်ထားတာဆို ခံစားလို.ကိုမရဘူး။
ကျော်ကျော်ဗိုလ် တို.လင်မယားဝတ်ထားလေးတော.အဆင်ပြေသားနော်။ သူ.မိန်းမလေးလဲမင်းသမီးနီးပါးလှတာဘဲ။ အရောင်လေးရွေးထားတာလဲ ငြိမ်တယ်။
အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ၀တ်စုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အဲ.ဒါကြောင်.ဒီလောက်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောမိတာပါ။
thinzar wint kyaw, phway phway = i love them!
မြတ်ကြည် February 12, 2012 at 1:41 AM
မောင်တလုံး ဟဲဟဲဆိုတာ ဘာလဲ?
စု၊ ဟုတ်တယ် ယဉ်တယ်နော်။
မိစံ၊ မြတ်ကြည်က အဝေးရောက်ဆိုတော့ မလာအားဘူးကွယ်။ တစ်ပြေးတဲ့ထဲလည်း မပါတော့၊ အဝတ်အစားဖိုးကုန်လို့ ဟီဟိ။
မောင်လေးရေ၊ ဝါဝါအောင်လို့ ပြင်လိုက်ပြီနော်။
ဟုတ်တယ်။ အခုကရှုပ်ရင်ပြီးရော ဝတ်သလားတောင် အောက်မေ့ရတယ်နော်။ အမြဲလာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါမမ။
အစ်မရေ၊ စိုးမြတ်သူဇာပုံလေး ရှာတင်လိုက်ပါပြီ။ နောက်တစ်ခေါက်လာရင်၊ ကြည့်လို့ရပါပြီ။ :D
Thanks for the comment annonymous :)
ပန်းချီ February 12, 2012 at 1:59 AM
like most (Melody), dislike most (Aunty Moh) :D
Thank you so much for all stars' photos nyimalay:))
နွေလ February 12, 2012 at 2:00 AM
သူတို့ကိုယ် သူတို့ မလှဘူးလို့ ထင်နေမှာစိုးလို့ :P
Sandakuu February 12, 2012 at 3:03 AM
အမှန်က အေးမြတ်သူပုံလေးကိုသဘောကျတယ်.. ရင်ဘတ်အနားသားအပေါ်တက်လိုက်ရင်တော်တော်အဆင် ပြေမယ်..
အဆိုးဆုံးကတော့ န၀ရတ် ဒေါင်းကွက်တွေလား..
Evy February 12, 2012 at 3:09 AM
တစ်စုတစည်းထဲ စုပေးထားတာ ကျေးဇူးပါ ညီမ မြတ်ကြည်ရေ။ အ၀ါရောင်တောက်တောက်နဲ့ ဘာဝတ်စုံမှန်းမသိလောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့သူကိုကြည့်ပြီး ရယ်ချင်နေတယ်
rose February 12, 2012 at 3:10 AM
စိုးမြတ်သူဇာ၊ ပုလဲဝင်း၊ မယ်လိုဒီ တို့ရဲ့ ၀တ်စုံလေးတွေကိုရော လူကိုရော ချစ်တယ်း)
စိုင်းစိုင်း၊ စိုးမြတ်သူဇာ ကြိုက်တယ်။
မကြိုက်ဆုံးက မို့မို့မြင့်အောင်ရယ်၊ အဝါဝမ်းဆက်နဲ့ မင်းသား ဘယ်သူလဲ မသိ ရယ်..။
Anonymous February 12, 2012 at 4:08 AM
i like your words under the photos!! :D :)))
ညယံ February 12, 2012 at 4:48 AM
မိုးဟေကို နဲ့ မယ်လိုဒီတို့ ရဲ့ ချိတ်အဆင်လေး ကြိုက်တယ် ။
မြတ်ကြည် February 12, 2012 at 5:53 AM
Thanks for the opinion Ama Pachi :)
နွေလ << အဲလိုဆိုတော့ အေးတာပဲကွယ်။
အစ်မကူး << အေးမြတ်သူရဲ့ ဝတ်စုံက အရမ်းပေါ်လွန်းလို့ အမြင်ရိုင်းသွားတာဖြစ်မယ်နော်။ နဝရတ် ဒီဇိုင်းကတော့ ဘယ်သူချုပ်ပေးတယ်မသိဘူး။ တော်တော်လေးကို လိုက်မလိုက်မသိတာပဲ။
အစ်မ Evy << :D ညီမရောပဲ။ သူ့ကိုယ်သူ တော်တော်ဟုတ်လှချည်ရဲ့ ပုံစံနဲ့
အစ်မ Rose << မယ်လိုဒီ ဝတ်စုံလေးကိုတော့ လူတွေတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်နော်။ စိုးမြတ်သူဇာကတော့ သူဝတ်တာနဲ့သူနဲ့အကုန်လိုက်တာပါပဲ။ Over 35 ရဲ့ ideal မော်ဒယ်လ်လို့တောင် ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်နော်။ :)
မမစင် << ညီမလည်း သေချာမသိဘူး။ ရယ်ရလို့တင်လိုက်တာ
အစ်မညယံ << မိုးဟေကို ချိတ်အနက်လေး အခုမှကြည့်မိတယ်။ လှသားနော်။
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး February 12, 2012 at 6:58 AM
ဂျေဒိုးနပ် မင်းသား ပာုက်ဘူးဗျာ့
ဂျေဒိုးနပ် မင်းသား က မြတ်သူအောင်အမလူမှားနေပြီ
နောက်ပြီး ဂျူးဂျူးကေ၀တ်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်လှတယ် cutting လှတယ် စီးကွင့်ကသိပ်မလှဘူး
အိချောပိုရဲ့ အကျီင်္လည်းလှတယ် ဒါပေမယ့်စီးကွင့်တွေက တမျိုးပဲ
အဲဒီကျောက်တွေ မြုပ်စိမြုပ်စိလေးတွေက တော်ယုံပဲလှတယ်
ဒါပေမယ့် လက်မောင်းမှာဇာတပ်ထားတာထက် ပြောင်ဆိုပိုလှမယ်ထင်၏
ကိုယ့်စိတ်နဲ့တော့ဘယ်တူမလဲ ကိုယ့်အကြိုက်အတိုင်းသာ မင်းသမီးတွေဝတ်ကြလျင်
မြတ်ကြည် February 12, 2012 at 7:17 AM
Cupid << ဟုတ်လား? ဆင်တူတွေဆိုတော့ မှားသကွယ်။ ပြင်လိုက်ပြီနော်။
Anonymous << ဖူးစုံပုံ ဘယ်မှာပြုတ်ခဲ့လဲ မသိပါဘူး။ စီထားတဲ့ အထဲမှာပါတယ်။ :D တင်လိုက်မယ်နော်။ အမြင်လေးတွေ ဖလှယ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်တော့ ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲနော။
Candy February 12, 2012 at 7:31 AM
များလွန်းလို့ ဘယ်သူ့ကို သဘောကျရမှန်းတောင် သိတော့ဝူး... ဟီး :D
san htun February 12, 2012 at 9:03 AM
ရိုးရှင်းတဲ့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသူ ဝတ်စုံလေး ကြိုက်တယ်..
ချစ်စံအိမ် February 12, 2012 at 10:59 AM
မြတ်ကြည်ရေ အကုန်လုံးလောက်ကိုတွေ့ ရပါတယ်
ကျေးဇူးနော် အားလုံးကအလန်းတွေကြီးဆိုတော့ :P
မြတ်ကြည် February 12, 2012 at 3:19 PM
ဟုတ်တယ် ကန်ဒီရေ၊ ထည့်ရင်းထည့်ရင်းနဲ့ များသွားတာ။ :D
ဟုတ်တယ် အစ်မလမင်း၊ ညီမလည်း လူစုံအောင်ထည့်လိုက်တာ ပုံ ၆၀ ကျော်သွားရော။ ဟီးဟီး :ap:
I like Melody's dress best. look simple.
မဒမ်ကိုး February 12, 2012 at 9:25 PM
မို့မို့မြင့်အောင်လို အသက်ကြီးမှ ကလက်နေတာကြီးတော့ကြိုက်ဖူး
မြတ်ကြည်ရေးတာတွေဘဲဖတ်ပြီး ရီမိတယ်း)))))
khinjasmine February 12, 2012 at 9:52 PM
ချစ်စနိုးဦး...မိုးဟေကို...ဝတ်မှုန်ရွှေရည်.... သင်ဇာဝင့်ကျော်...သက်မွန်မြင့် :)
မြတ်ကြည် February 12, 2012 at 11:57 PM
Thanks for the comment Anonymous. :)
အစ်မဒိုး၊ ဖတ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆို ရေးရကျိုးနပ်ပြီ။
မခင်စံပယ်၊ comment အတွက်ကျေးဇူးပါနော်။ ဘလော့ ရေးမယ်ဆိုလည်း အားပေးနေမယ်နော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 12, 2012 at 11:59 PM
တစုတစည်းတည်း မြင်လိုက်ရတော့ ဘယ်ဝတ်စုံက ပိုလှတယ် ဘယ်ဝတ်စုံကတော့ဖြင့် ဘယ်လို တင့်တယ်ဆိုတာ သေချာ ခွဲခြားမြင်နိုင်တာပေါ့နော်။ ပြူးပြဲနေတဲ့ ဝတ်စုံတွေကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူး
တစ်ချို့တွေများကျတော့ လူပြောချင်စရာ.. သက်မွန်မြင့်လိုရိုးရာဝတ်စုံကို အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား ဝတ်တတ်သူတွေ များလာပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတာပါဘဲ။ ဟိုးအရင်နှစ်တွေများဆို ချိတ်ထမီတောင် သိပ်မတွေ့ရဘဲ စီးကွင့်စ်တွေချည်း မြင်ရတယ်
ဒီနှစ်တော့ ချိတ်ပေါ်မှာ စီးကွင့်စ်လေးတွေ ထိုးတာဝတ်လာပြန်တော့ ဝမ်းသာမိရတယ် မဟုတ်ရင် ချိတ်ထမီခေတ် မရှိတော့ဘူးလားတောင် ထင်မိတယ်။
ချစ်ကြည်အေး February 13, 2012 at 4:43 AM
လင်းဇာနည်ဇော်၊ မယ်လိုဒီနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၀တ်ထားတာလေးတွေ ကြိုက်တယ် ညီမ မြတ်ကြည်ရေ။
ကျောက်တွေ စီပြီး ၀တ်ထားတာ သိတ်ပြီး bold ဖြစ်လွန်းနေတယ်။ လူတွေက လှရက်နဲ့...
သက်ဝေ February 13, 2012 at 4:44 AM
မယ်လိုဒီနဲ့ စိုးမြတ်သူဇာကို သဘောကျတယ်... ဒါပေမယ့် ပုံတွေ တစုတဝေးထဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် တင်ထားပေးတဲ့ ညီမ မြတ်ကြည်ကို ပိုသဘောကျပါတယ်...း))
အင်ကြင်းသန့် February 13, 2012 at 5:19 AM
သက်မွန်မြင့်ဝတ်စုံကိုကြိုက်တယ်။ ဖူးစုံဝတ်ထားတဲ့ ပုစွန်ဆီရောင်ကို အရမ်းကြိုက်နေတယ်။ မို့မို့မြင့်အောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်က ဒေစီကျော်ဝင်းထင်တယ် ...အသက်ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်နေကြတယ်။ :P
မြတ်ကြည် February 13, 2012 at 5:37 AM
ဟုတ်တယ် အစ်မချော၊ ဒီနှစ် ချိတ်တွေ ပြန်ခေတ်စားလာတယ်။
ကျောက်တွေက တပြွတ်ကြီးစီထားတော့လည်း မလှဘူးရယ်။ ရှင်းရှင်းလေးတွေပဲလှတယ်နော် အစ်မချစ်ကြည်အေး။
ကျေးဇူး အစ်မသက်ဝေ၊ ညီမလည်း ဝါသနာပါတော့ စုပြီးတင်လိုက်တာ၊ သူလည်းကြည့် ကိုယ်လည်းကြည့်ဆိုပြီး။ :)
ကြီးမှ ဝက်သက်ပေါက်တာဆိုးတယ် အစ်မအင်းကြင်းရေ။ :D ဖူးစုံ အကျီလေးကို ကြိုက်ကြတယ်။
မြတ်ကြည်လေးရေ.. ခုလိုစုံစုံလင်လင်တစုတစည်းတည်း ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနော်
မြတ်ကြည် February 13, 2012 at 7:12 PM
အဲဒါက မေသဉ္ဇဦးရဲ့ တူမ မေသက်ခိုင် အစ်မ။ :)
Vista February 13, 2012 at 7:48 PM
မြတ်ကျိ ရေးထားတာတွေ ဖတ်တာပိုရီရတယ် သူတို့ နဲ့ လိုက်တယ်
မြတ်ကြည် February 14, 2012 at 2:46 AM
mstint February 14, 2012 at 9:51 PM
စိတ်ကူးလေးကောင်းလိုက်တာ ၂၀၁၀ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ပွဲတက်ဝတ်စုံတွေကို ယှဉ်တွဲလုပ်သွားတာ
ဖြိုးဇာနည် February 16, 2012 at 12:13 AM
မြတ်ကြည် February 16, 2012 at 3:41 AM
Thank You Aunty Tint and Ko Phyo Zarni :)
Anonymous February 18, 2012 at 7:02 AM
အကြိုက်ဆုံးက သက်မွန်မြင့် နဲ့ ချစ်သုဝေ
သက်မွန်မြင့်ကို လူလည်း ကြိုက်တယ် .. အကျီဒီဇိုင်းလည်း ကြိုက်တယ် ..
ချစ်သုဝေ က လူကို ကြိုက်တာ .. :))
မင်းသားထဲမှာ ပိုင်ဇေရဲထွန်းး .. :P
ဒါပေမယ့် ခင်လှိုင့် ပုံကို ကြည့်ပြီး
ကြွေသွားတယ် .. :D
တရုတ်ရှေးကားထဲက ဒီဇိုင်းနဲ့ ..း))
စမိုင်းလည်း တော်တော်လေးကို ၀လာပါတကား ..;)
သူပေါ်ကာစ မျက်မှန်ကိုင်း အမည်းနဲ့ကို
မျက်လုံးထဲ မြင်မိလို့ ..း))
ဟိုပြောင်တောင်တောင်ဗေဗေ့ဂျိ is Moe Yan Zon
ဒီဝတ်စုံကို ဘာလို့ခေါ်လဲဟင်?.....he is Rota ...i thought mixing Rakhine traditional design :)
ညီမလေးရေ.. လာအားပေးတယ်နော်.. တော်လိုက်တာကွယ်.. မိန်းကလေးတွေအကြိုက် အားလုံးတနေရာထဲမှာ စုစုစည်းစည်း ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ။
ဒီနှစ် အကယ်ဒမီဝတ်စုံတွေထဲမှာတော့ စိုးမြတ်သူဇာကို ပထမ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေထဲမှာတော့ မေသန်းနု၊ သက်မွန်မြင့်၊ မိုးဟေကို၊ ပုလဲဝင်း၊ မယ်လိုဒီ၊ သင်ဉ္စာဝင့်ကျော်၊ နန်းစုရတီစိုး၊ သဇင် တို့အားလုံး လှကြတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ လှအဉ္စလီတင့်၊ န၀တ်ရတ်၊ ချမ်းမီမီကို၊ မို့မို့မြင့်အောင်( အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်မှုမရှိ)၊ စိုးပြည့်သဇင်၊ ဆုရွှန်းလဲ့(နေရာနဲ့ဝတ်စုံ မသက်ဆိုင်)။ ကျန်တာတွေကတော့ ပုံမှန်ပါဘဲ။ ဒီနှစ်လဲ တင်ပေးအုံးနော်။ ခုလို တစုတစည်းထဲ မြင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ။